Ny silika tsara indrindra ho an'ny aquarium: fampitahana sy torolàlana | Ny trondro
Tsy misy isalasalana, ny silicone ho an'ny aquarium dia fototra iray izay tsy maintsy anananay amin'ny tranga mety hitranga, izany hoe raha misy tampoka tampoka mipoitra ao anaty aquarium misy antsika ary manomboka very rano. Ny silicone no vokatra tsara indrindra ho hitantsika manamboatra azy, satria tsy tantera-drano izy io ary raha voaomana manokana dia tsy manimba ny fahasalaman'ny hazandrantsika.
Ao amin'ity lahatsoratra ity ho hitantsika izay sililona azontsika ampiasaina ao amin'ny aquarium misy antsika, ny marika sy ny loko tsara indrindra ary na aiza na aiza hividianana ny vokatra mora indrindra. Ho fanampin'izay, raha liana amin'ity lohahevitra manontolo momba ny aquarium an'ny DIY ity ianao, dia mamporisika anao hamaky ity lahatsoratra ity koa fananganana aquarium ranon-dranonao manokana.
1 Ny silikônina aquarium tena ilaina indrindra
2 Fa maninona no manokana ny silikônan'ny aquarium ary tsy afaka mampiasa silikola fotsiny ianao?
3 Mety ve ny silikila tsy miandany na amin'ny aquarium?
4 Loko silikaly Aquarium
5 Fomba ampiharana tsara ny silikônan'ny aquarium
6 Mandra-pahoviana no tokony avela maina ny silika ao anaty aquarium?
7 Marika silikônina tsara indrindra amin'ny Aquarium
8 Aiza no hividianana silikona aquarium mora vidy kokoa
Ny silikônina aquarium tena ilaina indrindra
Mba tsy hanao fahadisoana amin'ny safidy, etsy ambany dia nanangona mivantana ny sasany amin'ireo silika an-tsokosoko aquarium tena ilaina indrindra ianao izay tsy hanana olana:
Ny silicone mahery fo ...
Soudal - Silicone ho an'ny ...
Fa maninona no manokana ny silikônan'ny aquarium ary tsy afaka mampiasa silikola fotsiny ianao?
Ny silikona Aquarium dia fitaovana tena ilaina amin'ny fanamboarana aquarium taloha na simba na fanangonana iray vaovao, ary koa amin'ny fametahana na fametahana ireo faritra sy haingon-trano. Na dia misy vokatra hafa manatanteraka an'io asa io ihany aza, ny silikola dia, tsy isalasalana, fa be mpampiasa indrindra, satria vokatra mifototra amin'ny silicone sy acétone miaritra ny hafanana tafahoatra, ka mahatonga azy io ho tonga lafatra. Etsy andaniny, ity fitaovana ity dia tsy mandeha amin'ny akila akrilika, fa tsy maintsy vita amin'ny vera.
Na izany aza, tsy ny silika rehetra azo alaina ara-barotra no azo antoka ampiasaina ao anaty aquarium, satria misy akora simika na fungicides vitsivitsy mety hisy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny hazandranoo. Na dia, raha ny tokony ho izy, raha milaza ilay marika fa "siligao 100%" dia famantarana fa azo antoka izy io, dia tsara kokoa ny misafidy vokatra iray natao manokana hampiasaina ao anaty akondro.
Mety ve ny silikila tsy miandany na amin'ny aquarium?
Azontsika atao ny mizara silicone ho vondrona lehibe roa, na acetic na tsy miandany. Amin'ny tranga voalohany, silipo iray izay mamoaka asidra ary manana fofona tena mampiavaka azy, mitovy amin'ny vinaingitra. Mety hisy fiatraikany amin'ny trondro sasany ary ambonin'izay dia mila maina kokoa izy io.
Ny silicone neutre kosa dia tsy mamoaka karazana asidra, tsy maimbo ary maina vetivety. Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny mampiasa azy io ho an'ny aquarium, na dia tena ilaina kokoa aza ny hividiananao silicone manokana hampiasaina amin'ity sehatra ity, satria ny singa dia afaka miova eo amin'ireo mpanamboatra. Ny silicones manokana dia natao manokana hampiasaina amin'ny akarium, ka tsy hahazo fampitahorana tsy ampoizina ianao.
Loko silikaly Aquarium
Raha mbola manokana ho an'ny aquarium ny silikona novidinao, dia izay aza mitondra zavatra simika mety hampidi-doza amin'ny ain'ny hazandranoo, ny fisafidianana ny loko iray na ny iray hafa amin'ny silicone dia critères estetika fotsiny. Ny mahazatra indrindra (na dia misy hafa aza, toy ny volondavenona na volontany) dia ny loko amin'ny silipo fotsy, mangarahara na mainty.
Ny aquarium be herim-po an'ny ...
Na dia tsy isalasalana aza fa ny loko silika mahazatra indrindraNy silipo fotsy dia tsy dia mijery tsara loatra ao anaty aquarium satria ny lokony (na dia miova aza ny zava-misy raha manana fantsona fotsy ny aquarium anao). Azonao atao ny mampiasa azy io hamehezana tarehimarika eo am-pototry ny aquarium.
Ny loko silônika tena atolotra indrindra ho an'ny aquarium dia, tsy misy isalasalana, mangarahara. Tsy vitan'ny hoe tsy maninona izay loko misy ny akarium, fa izy io dia hifangaro ao anaty rano sy vera. Azonao atao ny mampiasa azy io hifikiranao na hanamboarana azy, noho ny lokony tsy misy ianao dia tsy ho hitanao na inona na inona.
Ny silika mainty, toy ny amin'ny fotsy, dia vokatra miankina amin'ny tsironao sy ny lokon'ny aquarium anao. Araka ny lazain'ny yayas, ny zavatra tsara momba ny mainty dia loko mijaly be, ary miaraka aminy koa mety ho safidy tsara izany raha te hanafina zavatra ianao na hametaka haingon-trano amin'ny faritra maizina, toy ny any aoriana.
Fomba ampiharana tsara ny silikônan'ny aquarium
Silisy mandeha tsara manamboatra aquariums, saingy tsy azonao ampiharina toy ny ankehitriny, ny mifanohitra amin'izay dia tsy maintsy jerenao ny toe-javatra maromaro sy ny fomba handehanana:
Ohatra, raha nividy Aquarium tanana faharoa, alao antoka fa tsy misy triatra ary, raha misy dia amboary amin'ny silicone aloha.
Tsara kokoa noho foana ny aquarium alohan'ny handehanana, satria ny tampon'ny toerana ampiharana ny silika dia tokony hadio sy maina ary ankoatr'izay dia mila maina.
Raha tsy te-hanafoana ny aquarium iray manontolo ianao dia azonao atao ny manafoana azy mandra-pahatonga ny fisaratsarahana tavela eny amboniny, na dia amin'ity tranga ity aza ianao dia tsy maintsy mitandrema fatratra tsy handatsaka silika ranon-javatra ao anaty rano (Araka ny azonao an-tsaina dia tsy manoro izany mihitsy izahay).
Raha mankany manamboatra vera izay efa namboarina tamin'ny silicone, diovy ny sisa tavela amin'ny antsy sy acétone azo ampiasaina. Mahereza tsara alohan'ny hanamboarana azy.
Ny silika ampiarahinao tsy mila manana miboiboikaRaha tsy izany dia mety hipoaka izy ireo ary hiteraka fivoahana hafa.
Toy izany koa, raha hanatevin-daharana sombin-vera roa miaraka amin'ny silicone ianao, alao antoka fa misy fitaovana eo amin'izy roa. Raha mifandray amina vera hafa ilay vera dia mety ho triatra raha mihena izy ireo na mihitatra noho ny fiovan'ny maripana.
Fanamboarana ny anatiny ivelany mba hamenoin'ilay silikon tanteraka ny triatra.
Farany, avelao ho maina izy raha mbola mila ianao.
Mandra-pahoviana no tokony avela maina ny silika ao anaty aquarium?
Raha te hiasa tsara izy, araka ny efa nolazainay taminao, tsy maintsy avelanao ho maina tanteraka ny silicone, raha tsy izany dia ho toy ny hoe tsy nanao na inona na inona ianao. Noho izany, zava-dehibe tokoa ny fanajana ny fizotran'ny fanamainana an'ity vokatra ity, izay mirona eo anelanelan'ny 24 sy 48 ora.
Marika silikônina tsara indrindra amin'ny Aquarium
Ao amin'ny tsena no ahitantsika a mariky ny silika be, Ka ny fitadiavana izay mety indrindra amin'ny akamaroanay dia mety ho zava-mahaliana tokoa. Izany no antony hahitantsika ny soso-kevitra indrindra amin'ity lisitra manaraka ity:
Ny silicones olivé dia a kilasika amin'ny tontolon'ny fananganana. Ny tsipika ho an'ny aquarium dia miavaka amin'ny fananana fanamainana haingana, ny firaiketam-po tsara ary ny elastika. Ankoatr'izay dia toherin'izy ireo tsara ny fahanterana, noho izany ny vokatra dia haharitra am-polony taona maro manao ny asany. Toy ny silika rehetra amin'ity karazana ity, ity vokatra ity dia mifanaraka amin'ny fitaratra gluing.
Ity marika mahaliana ity dia manao dokam-barotra fa ny vokany, izay mikendry indrindra ny aquarium dia mahatohitra ny tsindry rano sy mifanaraka amin'ny aquariums sira. Mangarahara izy ary, satria mifanaraka amin'ny vera, azonao atao ny manamboatra aquariums, tank tank, greenhouse, windows ... ho fanampin'izany dia manohitra ny taratra UV amin'ny jiro izy, ka tsy hahafoana ny fifikirana.
Soudal miavaka amin'ny maha vokatra mangarahara sy mety azy ho an'ny aquariums, izay ambara fa manohitra manokana ny fiovan'ny mari-pana. Tsy miasa afa-tsy ny mamatotra fitaratra amin'ny vera, toy ny ankamaroan'ny silika, ary tsy azo hosodokoina. Izy io dia manana haavon'ny adhesion tena tsara.
Ny zavatra tsara momba ny vokatra an'ity marika ity dia, ankoatry ny namboarina manokana ho an'ny aquariums, ny cannula dia manana kanula namboarina izay azo apetraka amin'ny toerana maro samihafa, mahatonga azy io ho mety amin'ny fanamboarana ny triatra kely indrindra ary ny tsy fampiasana ny basy. Fanampin'izany, maina haingana izy ary manakana ny karazana fivoahana rehetra.
Ary miafara amin'ny marika iray hafa tena soso-kevitra indrindra, izay tsy vitan'ny manamboatra silicones mikendry ny aquariums, fa be mpampiasa koa eo amin'ny sehatry ny matihanina. Ny silipo Wurth dia miavaka amin'ny fanamainana haingana dia haingana, tsy dia ratsy tarehy rehefa mandeha ny fotoana, manohitra ny maripana avo sy ambany ary tena miraikitra. Na izany aza, tsy maintsy mitandrina ianao mandritra ny fanamainanaana ary tazomy amin'ny sifotra voalaza ao anaty tavoahangy ny silicone.
Marika ity Manam-pahaizana momba ny vokatra DIY Izy io dia manana silipo tena tsara dia tsara ho an'ny aquariums. Misongadina izy ireo amin'ny fotoana fanamainana haingana, ary koa ny mifanentana tsy amin'ny vera ihany, fa amin'ny alimina sy PVC ihany koa. Mangarahara izy io, tsy misy fungicides ary mora ampiharina, ka mahatonga azy io ho safidy tena tsara.
Ny silika manokana ho an'ny aquarium an'ny marika ihany koa azo ampiasaina any ivelany, satria mahatohitra ny rano sy ny toetrandro. Manana fofona azo ekena izy io, marefo ary mazàna miraikitra tsara amin'ny vera, ka mety amin'ny fanamboarana na fananganana aquarium.
Aiza no hividianana silikona aquarium mora vidy kokoa
Misy toerana maro samihafa izay ahafahantsika mividy silikonin'ny aquarium, satria ny fivarotana azy dia tsy voafetra ho an'ny fivarotana biby ihany, fa azo atao ihany koa ny mahita azy any amin'ny toerana manokana amin'ny DIY sy ny fananganana.
Voalohany indrindra, amin'ny Amazon ho hitanao ny marika silika marobe mahavariana. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mijery ny hevitry ny mpampiasa hafa hahalalanao sy hisafidianana ny silika izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao indrindra. Ary raha nifanaraka tamin'ny lahasa Prime ianao dia hanana izany ao an-trano ao anatin'ny fotoana fohy.
Leroy Merlin Tsy manana karazany marobe izy io, raha ny marina, ao amin'ny pejiny an-tserasera dia manana silicones roa manokana ho an'ny aquarium an'ny marika Orbasil sy Axton izy. Ny zavatra mahaliana dia azonao atao ny manamarina raha misy ao amin'ny magazay ara-batana, zavatra tena ilaina hialana amin'ny maimaika.
Any amin'ny foibe fiantsenana toa Carrefour Izy ireo koa dia manana marika silika vitsivitsy misy, na dia tsy voalaza mazava raha ho an'ny aquariums. Na izany aza, azonao atao ny mijery ny masontsivana ary misafidy raha hividy azy ara-batana na an-tserasera amin'ny alàlan'ny Marketplace, safidy tena mahaliana.
En Bricomart Manana tombo-kase tokana izy ireo ho an'ny Aquariums, farafaharatsiny amin'ny Internet, avy amin'ny marika kertik. Toy ny erbs hafa mitovitovy amin'izany, azonao atao ny manamarina ny fisian'ny fivarotana izay akaiky anao indrindra, raiso izany na vidio amin'ny Internet.
Farany, ao amin'ny Bauhaus Izy ireo koa dia manana silikola tokana sy mangarahara ary manokana ho an'ny aquarium sy terrarium, izay hitanao amin'ny Internet sy any amin'ny magazay ara-batana. Izy io dia tena mitovy amin'ny tranokala DIY hafa, satria azonao atao ny manafatra an-tserasera na maka izany amin'ny magazay.
Ny silicone ho an'ny aquarium dia tontolo iray manontolo izay, tsy isalasalana, dia tsy maintsy fehezina mba tsy ho voafitaka isika rehefa misy fivoahan'ny aquarium antsika. Lazao aminay, efa nitranga taminao ve izany? Inona no zavatra niainanao tamin'ny silicone? Te hanana marika manokana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » Aquariums DIY » Silikona Aquarium